Sida loo dayactir Sound ee iPhone e
Lahaanshaha arrimaha dhawaaqa in aad iPhone nacayso kartaa xaalad jahawareer galay noloshaada! Maxaa diidaya? Ka dib oo dhan, aad iibsatay qiimo waxaa dhibtay arrin u baahan in si degdeg ah lagu xaliyo. Halkii iyagoo argagax ku dhufatay dhibaato la yaab leh, xusna iPhone joojin kartaa saara dhawaaqa noocyo kala duwan oo sababo. Maxay tahay in aad sameyso waa baaro sababta dhabta ah taasoo keentay in sida dhalato ah.
Inta badan dhibaatada waxay dhacdaa marka aad bareesada ka iPhone ka soo dajinayo ama waqtiga ay ka saareen daaraa ka Jack ah. Xaaladdan oo kale, waxaa jira hardware-gaar ah buuqooda, software iPhone ayaa waxay noqonaysaa inay dami afhayeenka sida ugu dhakhsaha badan u ogaadaa xiriir qabaan ama daaraa ku xirnayn. Waxa ay noqon kartaa nasiib darro laakiin marka xaaladaha sida isku xirnaanta silig dabacsan waa isha waxaas oo dhan ka dib undocking qalabka ama jiidaya daaraa soo baxay, software karaan mucaaradka, taasoo keentay in codka lahayn.
Sida habboon, calaamadaha arrimaha dhawaaqa iPhone ka kooban yihiin:
1.iPhone siddo laakiin afhayeenka daliil waxtar lahayn wixii shaqo kale
2.iPhone soo saarta codka lahayn marka xayiran in hab headphone ah
3.iPhone abuuraa codka lahayn wicitaanada, barnaamijyadooda, music, iwm
Sida user ah, waa la fahmi karo sida tani dhibaato ka mid kama dhufsan karo hurdo aad habeenka! Waxaad u isku dayay ka dib markii qaar ka mid ah dayactir ku Hanuuniyaa laakiin ciddi uma. Isla mar ahaantaa, xilsaarayo shaqada ku takhasusay la heli karo, waayo, waa wax aad dib u riixay. Marka laga gaynta calaamadaha ku dhibaya, waxaad isku dayi kartaa xal u samaynta lacagta sida ku liis-gareysan ee hoos.
Dhawaaqa nidaamka noocuu
Sidaas waxa aad heli kartaa marka qof uu ku baaqay in si fudud ama guji badhanka goobaha maqal dhawaaqa ciyaaro. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka jabaqda ma ka shaqeeya qalab macruufka sida qufulka / furo dhawaaqa, farriimaha nidaamka ama qasabno keyboard dhici in this category
Dhawaaqa heegan noocuu
Waxaad booqan kartaa goobaha icon iyo helin ay ku maqlaan codka xiisaha laakiin ma dhawaaqyada sida laga soo saaro waqti oo aad ku wicitaan oo taleefan ah, fariin qoraal ama email waa tilmaame ah ee codka heegan ku dhibaya.
-Combination Ee heegan / nidaam codadka
Waxay tani dhacdaa marka dhawaaq shaqeeyaan hab goosgoos ah ama marka la isku daro sida ee kor ku xusan.
Arrimaha dhawaaqa -Additional
Inta badan ma dhawaaqa ama arrimaha codka ah loola gurracan oogadiisa ka tebin dhabta ama la xiriira jidka Toosan loo maamulaa wax kasta oo qayb kale. Waa in aad u hubiyo arimahan aad.
Sixidda arrimaha kale ee codka
Iyada oo dhammaan rabshooyin helitaanka wanaagsan oo aad iPhone, isagoo garanaya sida loo xallin lahaa arrimaha sanqadha waa muhim. Waxaa jira arimo dhowr ah oo istaahila in la isku dayayo:
1.Prior in fulineynin dayactir kasta oo hardware, aad u hesho a 'DFU soo celin' hore, taas oo keliya baa la samayn karaa inta lagu guda jiro hab DFU ah. Isku day oo ay bartaan in ka hor boodaya gal this soo celiyo.
2.You dib-u-furaysto karaa iPhone in ay dekedda iyo ka dibna aad u saaro. Inta badan waxa kaliya ee u qaybin iyo haddii aad ugu xidhmaan iPhone in ay dekedda ka, software ah uu kiciyay waqti.
3.Replacing isku xira dekedda waa hab kale oo wax degitaanka. Inta aad had iyo jeer la yaabi kartaa sababta, xaqiiqda ah waa xirto qayb xira waxay leedahay qaar ka mid ah fiilooyinka iyo qaybo ka mid howlaha dhawaaqa oo dhan iPhone. Waxay noqon kartaa wax lala yaabo ah in la ogaado inta badan in ka mid ah arrimaha codka waa la xaliyay ka dib markii bedel xira dekedda.
4.In ay dhacdo in aad isticmaasho samaacado, furaysto in ay mar kale ka qaad. Ka dib marka aad samayn in, waxaad isku dayi kartaa kordhaya / hoos mugga. Haddii aad telefoonka ayaa sheegay in Ringtone (headset), waxaa laga yaabaa in sababtoo ah qalabka weli waa hab fikirka qabo samaacado ku shidan ee.
5. isku dayi kartaa in boodhka isku xira dekedda isticmaalaya burush. Tani waa mid ka mid ah gobollada in ay been ka dhow yahay inuu ku hadla oo raasamaal Carro waa suurto gal. Hadda, haddii aadan Ma cadda ciidda cufan off, waxaa jira fursad sare oo software la khiyaaneeyey galiyey iPhone la jaro.
Xoogaa 6.Tap si xaq ah screen guriga. Under sanduuqa battariga tani waa xidhiidh afhayeenka. Xataa haddii wax uu noqday dabacsan, siyoodba ma noqon doono xal shaqada ah, laakiin ugu yaraan, waxaad ka heli doontaa fikrad.
Wax 7.Another waxaad isku dayi kartaa in u baahan tahay khibrad la isticmaalayo pin af badan si aad u nadiifiso siigada gudaha dekedda headphone ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay wax walba oo kale ku guuldareysto, u tag resetting aad iPhone ro goobaha default. Haddii kale, soo celinta qalab aad ka gurmad ka weyn sidoo kale ku siin karaa fursad ah in ay dib ugu helaan in ay avatar asalka aad. Ka sokow, xarunta adeega had iyo jeer waa hadii aad ku kacdana.
10 iPhone nidaameed Dhibaatooyinka on macruufka 8
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir Sound ee iPhone